Jobs at Shwe Phon Co.,Ltd | MyJobs
About Shwe Phon Co.,Ltd
ရွှေဘုန်းကကုမ္ပဏီလီမီတက်သည် လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာ အမျိူးမျိူးနှင့် စက်အပို ပစ္စည်းများကို နိူင်ငံအနှံဖြန့် ဖြူးရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။လယ်ထွန်စက်၊စပါးရိတ်သိမ်း ချွေလှေ.စက်၊ကြံစိုက်စက် အစရှိသည့် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာအမျိူးမျိူးကို တရုတ်၊ထိုင်း၊ဂျပန်နှင့် အမေရိကန်နိူင်ငံတို့ မှထုတ်လုပ်ပြီးနိူင်ငံတကာ အရည်အသွေးသက်မှတ်ချက်နှင့် ပြည်စုံ ဈေးနှုန်း သင့်တင့်မျှတသော လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာအမျိူးမျိူးနှင့် စက်အပိုပစ္စည်းများကိုမြန်မာနိူင်ငံအတွက်တစ်ဦးတည်းကိုယ်စာလှယ် မူပိုင်ခွင့်ရယူပြီးမြန်မာ နိူင်ငံအနှံဖြန့် ဖြူး ရောင်းချပေးနေပါသည်။မန္တလေးမြို့ တွင် ရွှေဘုန်း ကုမ္ပဏီလီမီတက်၏ရုံးချုပ် တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်၊ရွှေဘို၊မကွေး၊စသည့်မြိုကြီးများတွင်ရွှေဘုန်းကုမ္ပဏီ၏ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ထားပြီးဝန်ဆောင်ပေးနေပါသည်။အထက်ပါ ရုံးခွဲများအပြင် မြန်မာနိူင်ငံအနှံအပြားတွင် ရွှေဘုန်းကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ် အရောင်းဆိုင်ခွဲမြား ၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များဖင့် နိူင်ငံအနှံ့အင်တိုက်ဖြန့် ဖြူး ရောင်းချပေးနေပါသည်။
ရွှေဘုန်းကုမ္ပဏီလီမီတက် သည် လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာ အမျိူးမျိူးနှင့် စက်အပို ပစ္စည်းများကိုနိူင်ငံအနှံ့ ဖြန့် ဖြူး ရောင်းချရာတွင် တောင်သူဦးကြီးများ လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိူင်စေရန် အတွက် ဘဏ်အရစ်ကျ၊သ/မ အသင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးနှစ်ရှည်ချေးငွေစနစ်ဖြင့်ရောင်းချသည့်စနစ် ၊စက်မှုလယ်ယာစနစ်JACA အစီစဉ် ၊စိုက်/ဘဏ်အရစ်ကျ ရောင်းချသည့်စနစ်များဖြင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေး နေပါသည်။လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာ အမျိူးမျိူးကို ၀ယ်ယူသည့် တောင်သူဦးကြီးများအတွက် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းမှု သင်တန်းများ၊ အခြေခံ စက်ကြံ့ခိုင်မှု စစ်ဆေးခြင်း၊ထိမ်းသိမ်းခြင်း သင်တန်းများပေးခြင်း၊ After Sales Service ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် ၀န်ထမ်းများဖြင့် လိုအပ်သလို အချိန်နှင့် တပြေးညီ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ Vision နှင့်အညီတောင်သာများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖြည့်ဆည်းပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ရွှေဘုန်း ကုမ္ပဏီလီမီတက်ဖြစ်ပါသည်။
19 Jobs Found at Shwe Phon Co.,Ltd
To plan and sell for agricultural machinery (Tractor, harvester). Self-confident and motivated p ...
Documentation Assistant – Mandalay- Female (1 ) Post
5 years experience in related field. Self-confident and motivated manager who can be targeted pl ...